Ahoana no hialana amin'ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona amin'ny YouTube - Victor Mochere
Ny zon'ny mpamorona dia zon'ny fananana ara-tsaina izay miaro ny mpamorona ny sangan'asa voalohany nataon'ny mpanoratra. Ny mpamorona dia manana zo manokana hamaritra raha mety hampiasain'ny hafa io asa voalohany io ary ao anatin'ny fepetra inona. Ny tompon'ny zon'ny mpamorona dia manana zo manokana hanonta, hamoaka, hanao fampisehoana, horonan-tsary, na hiraketana zavatra haisoratra, zavakanto, na mozika, ary manome alalana ny hafa hanao toy izany koa.
Ny fitomboan'ny olana momba ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona amin'ny fampiasana YouTube
Ahoana no iarovan'ny Lalàna Copyrights ny horonan-tsary ao amin'ny YouTube
"Fampiasana ara-drariny" araka ny Lalàna momba ny zon'ny mpamorona
Politika momba ny zon'ny mpamorona an'ny YouTube
Ahoana ny fanarahana ny politikan'ny zon'ny mpamorona sy ny lalàna mifehy ny zon'ny mpamorona
Maro ny olona mihevitra fa ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona dia mitranga raha tsy misy olona maka sary an-tsaina ny asa soratr'olona na mozika. Tsy fantatr'izy ireo fa misy fiantraikany amin'ny zon'ny mpamorona koa ny fandefasana horonantsary na haino aman-jery ao amin'ny YouTube. Rehefa misy olona mandefa lahatsary ao amin'ny YouTube miaraka amin'ny mozika ambadika na horonan-tsary nalain'olon-kafa, dia voarohirohy mivantana ny zon'ny mpamorona.
Raha mampiasa fitaovana mozika an'olon-kafa, sary, fampisehoana, na asa hafa tany am-boalohany tsy nahazoan-dalana avy amin'ny mpamorona ny mpamorona ny lahatsary, dia mety mandika ny Lalàna momba ny zon'ny mpamorona ny afisy na mpamorona YouTube. Miankina betsaka amin'ny Lalàna momba ny zon'ny mpamorona ao Etazonia ny YouTube mba hampiharana ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona.
Ny Lalàna momba ny zon'ny mpamorona dia manome fiarovana ara-dalàna ho an'ny "asa tany am-boalohany nataon'ny mpanoratra raikitra amin'ny fomba fanehoana azo tsapain-tanana, fantatra ankehitriny na novolavolaina taty aoriana, izay azo tsapain-tanana, na averina na ampitaina amin'ny fomba hafa, na mivantana na miaraka amin'ny fanampian'ny milina na fitaovana. . Ny lahatsary YouTube dia voaaro mazava tsara amin'ny Lalàna momba ny zon'ny mpamorona mitovy amin'ny fandraketam-peo sy horonan-tsary noforonina ho an'ny fahitalavitra, sinema, radio, na fitaovana hafa. Ny Lalàna momba ny zon'ny mpamorona dia manome ny tompon'ny zon'ny mpamorona ny zo manokana handray anjara amin'ireto hetsika manaraka ireto:
Avereno amin'ny kopia na firaketana phono ny asa voaaro
Mamorona asa hafa azo avy amin'ny sangan'asan'ny tompony
Zarao amin'ny besinimaro ny kopia na firaketana phono an'ny asa misy zon'ny mpamorona amin'ny alàlan'ny fivarotana na famindrana fananana hafa, na amin'ny fanofana, fanofana, na fampindramam-bola
Manaova ampahibemaso ny asa soratra, mozika, tantara an-tsehatra ary choreografika, pantomimes, sary mihetsika, ary asa an-tsarimihetsika hafa an'ny tompony imasom-bahoaka, mivantana na amin'ny alalan'ny fampitana feo/vitsika.
Asehoy eny imasom-bahoaka ny sarin-tsary, sary, na sary sokitra voaaro amin'ny zon'ny mpamorona, ao anatin'izany ny sary tsirairay amin'ny sary mihetsika na asa an-tsary hafa.
Raha fintinina, ny tompon'ny zon'ny mpamorona ihany no afaka mamerina na manomana asa izay avy amin'ny asa tany am-boalohany raha tsy hoe:
Ny tompon'ny zon'ny mpamorona dia nanome alalana olona iray hafa hampiasa ilay asa voaaro, na
Ny fampiasana ny asa misy zon'ny mpamorona dia atao eo ambanin'ny fiarovana ny "fampiasana ara-drariny".
Ny fanavahana ny “Fair use” dia foto-pampianarana ara-dalàna izay mamela ny olona iray hampiasa asa voaaro amin'ny zon'ny mpamorona tsy nahazoana alalana avy amin'ny tompony amin'ny toe-javatra voafetra. Ny fanavakavahana amin'ny fampiasana ara-drariny dia iray amin'ireo fiarovana voarohirohy matetika indrindra amin'ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona. Ny toe-javatra misy ny fampiasana ara-drariny ny fitaovana misy zon'ny mpamorona dia hita ao amin'ny fizarana 107 amin'ny Lalàna momba ny zon'ny mpamorona. Mametraka ireo lafin-javatra tokony hodinihin'ny fitsarana amin'ny fanapahan-kevitra raha toa ka “fampiasana ara-drariny” azy ny fampiasan'ny olona ny sanganasa voaaro. Ny lafin-javatra tsy maintsy heverin'ny fitsarana dia:
Ny tanjona sy ny toetran'ny fampiasana, ao anatin'izany ny hoe ara-barotra ny fampiasana izany na natao ho an'ny fanabeazana tsy mitady tombontsoa
Ny toetry ny asa voaaro amin'ny zon'ny mpamorona
Ny habetsahana sy ny haben'ny ampahany ampiasaina mifandraika amin'ny sangan'asa voaaro amin'ny ankapobeny
Ny fiantraikan'ny fampiasana amin'ny tsena mety ho an'ny sandan'ny asa voaaro
Eken'ny lalàna fa mety handinika lafin-javatra hafa ny fitsarana rehefa manombana ny fitakiana fampiasana ara-drariny. Fanampin'izany, ny fitsarana dia hanombantombana ny fitakiana tsirairay amin'ny tranga tsirairay - tsy misy raikipohy mazava mihatra amin'ny famaritana ny fampiasana ara-drariny. Na izany aza, ny fampiasana ara-barotra ny asa dia tsy dia heverin'ny fitsarana ho "ara-drariny".
Hita eo afovoan'ny tompon'ny zon'ny mpamorona sy ny afisy video ny YouTube. Mahazo fangatahana maro ny YouTube mba hanesorana horonan-tsary mifototra amin'ny fitakiana zon'ny mpamorona. Mba hiarovana ny tenany amin'ny fitakiana fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona dia nanao ireto dingana manaraka ireto ny YouTube:
Namoaka torolàlana momba ny fampiasana ara-drariny manazava ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona sy ny fotopampianaran'ny fampiasana ara-drariny. Ny torolalan'izy ireo dia mampahafantatra ny mpampiasa fa ny fanomezana fotsiny ny fitaovana misy copyright amin'ny tompony dia tsy hanafaka ny mpampiasa amin'ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona
Rafitra ID votoaty nampiharina. Manampy ny tompon'ny zon'ny mpamorona hamantatra sy hitantana ny atiny ao amin'ny YouTube ny rafitra Content ID an'ny YouTube. Ny horonan-tsary tsirairay dia ampiakarina sy nojerena amin'ny angon-drakitra misy rakitra natolotry ny tompona atiny. Raha voafaritry ny rafitra fa ny votoaty ao anaty horonan-tsary vaovao dia mifanandrify amin'ny horonantsary nalefan'ny tompon'ny zon'ny mpamorona teo aloha, dia mamela ny tompony ny YouTube:
Ampiheno ny feo mifanaraka amin'ny mozikany
Sakanana video iray manontolo tsy hojerena
Hahazo vola amin'ny fanaovana doka manohitra azy io
Araho ny antontan'isa momba ny mpijery
Avelao ny asa ary omeo fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa
Ity ny fomba fanarahana ny politikan'ny zon'ny mpamorona sy ny lalàna mifehy ny zon'ny mpamorona.
Mangataha alalana amin'ny tompony alohan'ny hampiasana ny asan'olon-kafa. Raha tsy namorona ny asa ianao dia mila mihevitra fa tsy anao ny asa ampiasaina malalaka amin'ny famoahana azy ao amin'ny YouTube. Mitadiava ny fahazoan-dàlana na mahazo alalana avy amin'ny tompon'ny zon'ny mpamorona alohan'ny handefasanao zavatra tsy noforoninao. Raha tsy mahazo alalana ianao dia ampiasao ny asa avy amin'ny vohikala manolotra mozika sy sary maimaim-poana
Vakio sy fantaro ny fifanarahana momba ny fahazoan-dàlana. Mety ho gaga ianao raha mahafantatra fa maro ny mpamorona ny asa tany am-boalohany no te hampahafantatra ny asany. Matetika izy ireo no mizara ny sangan'asany amin'ny sarany na amin'ny fanomezan-danja fotsiny. Ireo fepetra ireo dia hofaritana ao amin'ny fifanarahana momba ny fahazoan-dàlana
Miezaha mitady fampiasana ara-drariny ny asa. Raha mampiasa fitaovana voaaro amin'ny zon'ny mpamorona ny horonan-tsarinao YouTube ho an'ny tanjona fanabeazana na tsy ara-barotra, dia azonao atao ny manome fahafaham-po ny fanafahana ny fampiasana ara-drariny amin'ny fanitsakitsahana. Alohan'ny handefasanao ny asa anefa dia azonao atao ny mijery azy io amin'ny manam-pahaizana iray raha tsy azonao antoka raha toa ny fampiasana ara-drariny ny asa misy zon'ny mpamorona.